Su'aalaha la Weydiiyo - SUNKON Technology Technology Co., Ltd.
waa maxay adeegga macaamiisha?
Ka jawaab gudaha 24 saacadood.
Sidee loo rakibaa mashiinka?
Waxaan soo bandhigi doonaa fiidiyoowga rakibidda, iyo sidoo kale buugga hawlgalka si looga caawiyo macaamiisha inay kaligood mashiinnada ku rakibaan.
Mashiinka ma ku samayn kartaa si waafaqsan shuruudahayga?
Haa! Adeeg gaar ah ayaa la bixiyaa.
Ka waran tayada mashiinadaada?
Waxaan u adeegsannaa noocyada caanka ah ee adduunka ee qaybaha korantada oo leh qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka gudaha ee wanaagsan, qaabeynta sare ee nolosha isticmaalka dheer, sidoo kale muuqaal muuqaal leh. Injineeradeenna xoogga badani waxay leeyihiin in ka badan 10 sano oo khibrad R&D ah oo arimahan ku saabsan, waxaan had iyo jeer u isticmaalnaa qaab dhismeedka / naqshadeynta mashiinadeena.
T / T way fiicnaan laheyd wareejinta degdegga ah iyo khidmadaha bangiga oo yar. L / C sidoo kale waa la aqbali karaa, laakiin nidaamku waa mid adag oo khidmaddu way badan tahay. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Western Union iyo Hubin kale oo Ganacsi.
Muddo intee le'eg ayay tahay dhalmada?
Caadi ahaan 20 ilaa 45 maalmood.
Sidee ku saabsan xirxirida mashiinada？
Mashiinnada waxaa lagu soo buuxin doonaa filim si looga hortago huurka, iyo sidoo kale alwaax ama santuuqa birta ee hoose taas oo u fududahay kor u qaadista mashiinnada
Waa maxay luqadda PLC ee mashiinnadaada? Suurtagal ma tahay in la isticmaalo luuqadeena?
Waxbarista ku saabsan PLC waxay ku qoran tahay Ingiriis. Haa. Marka hore waxaan kuu soo direynaa tilmaamaha oo ku qoran Ingiriisi, ka dibna waxaad u tarjumaysaa luqaddaada oo aad noogu soo celinaysaa. Markaa waxaan ku samayn karnaa afkaaga sida ku qoran tarjumaaddaada.
Waa maxay HS CODE ee alaabtaada?
Muraayadda muraayadda, laba jibaaran, qaabka loo yaqaan 'Edger glass', waa 84642010. Beveller glass, driller muraayad, muraayadda muraayadda waa 84649019. Muraayada dhalada waa 84248999. Muraayadda sandblaster waa 84243000.